လူတှကေို အုပျစုအလိုကျ ခှဲခွားသတျမှတျကွညျ့မယျဆိုရငျ . . . . .
တဈကမ်ဘာလုံးက လူတှကေို အုပျစု (၅) မြိုး ခှဲခွားသတျမှတျလို့ ရပါတယျ။
အုပျစု (၁)။ အရမျးဆငျးရဲသူမြား
အုပျစု (၂)။ ဆငျးရဲသူမြား
အုပျစု (၃)။ အလယျအလတျတနျးစားလူမြား
အုပျစု (၄)။ ခမျြးသာသူမြား
အုပျစု (၅)။ အရမျးခမျြးသာသူမြား (Millionaires, Billionaires)
အဆငျ့အလိုကျ သူတို့တှရေဲ့ စဉျးစားတှေးတောမှုကို သုံးသပျကွညျ့ရငျ
အုပျစု (၁)။ အရမျးဆငျးရဲသူမြားဟာ တဈနတေ့ာအတှကျပဲ စဉျးစားကွတယျ။
အုပျစု (၂)။ ဆငျးရဲသူမြားဟာ တဈပါတျစာအတှကျပဲ စဉျးစားကွတယျ။
အုပျစု (၃)။ အလယျအလတျတနျးစားလူတှဟော တဈလစာပဲ စဉျးစားကွတယျ။
အုပျစု (၄)။ ခမျြးသာသူမြားဟာ တဈနှဈစာအတှကျပဲ စဉျးစားကွတယျ။
အုပျစု (၅)။ အရမျးခမျြးသာသူတှကေတော့ အနညျးဆုံး ၁၀ နှဈစာ အထိ စဉျးစားကွတယျ။
# သူတို့ရဲ့ အဓိကရညျမှနျးခကျြတှကေို သုံးသပျကွညျ့ပွနျရငျ
အုပျစု (၁) နဲ့ (၂) - ဆငျးရဲနဲ့ အရမျးဆငျးရဲအုပျစုရဲ့ ရညျမှနျးခကျြက အသကျရှငျရပျတညျရေးတဈခုပဲ။
အုပျစု (၃) - အလယျလတျတနျးစားလူတှရေဲ့ ရညျမှနျးခကျြက ခြောငျခြောငျလညျလညျ နနေိုငျဖို့ပါ။
အုပျစု (၄) နဲ့ (၅) - ခမျြးသာနဲ့ အရမျးခမျြးသာအုပျစုက ပူပနျကွောငျ့ကကြငျးတဲ့ ဘဝကို ရရှိဖို့ပါ။
# အခုတဈခါ အုပျစုတှကေ လူတှဟော ဘယျလိုလူမြိုးတှလေဲ။
အုပျစု (၁) အရမျးဆငျးရဲသူမြားမှာ တဈနလေု့ပျမှ တဈနစေ့ားရတဲ့ အလုပျကွမျးသမာတှေ၊ နစေ့ား အလုပျအလုပျသမားတှပေါဝငျကွပါတယျ။ နစေ့ဉျနတေို့ငျး စားဖို့သောကျဖို့ ပူပနျနကွေရတယျ။
အုပျစု (၂)။ ဆငျးရဲသူမြားဟာ တဈပါတျစာလုပျခရတာလေးနဲ့ တဈပါတျစာ လောကျငအောငျ သုံးကွသူတှပေါ။ တဈပါတျတခါ ပိုကျဆံ ကုနျခါနီးကရြငျ ပူတတျသူတှပေါ။
အုပျစု (၃)။ အလယျအလတျတနျးစားလူတှကေတော့ လခစားဝနျထမျးတှပေါ။ သူတို့ဟာ လကုနျခါနီးကရြငျ နောကျလဆနျးတာနဲ့ ရဖေိုး၊ မီဖိုး၊ အိမျခနျးငှားခ၊ ကလေးကြောငျးလခပေးဖို့တှေ ပူပနျနကွေရပွီ။ တဈလတဈခါ ပူပနျနကွေရသူတှပေါ။
အုပျစု (၄)။ ခမျြးသာသူမြားဟာ တဈနှဈစာဝငျငှကေို ရှိနကွေလို့ တဈနှဈမှ တဈခါလောကျ ပူပနျကွတယျ။
အုပျစု (၅)။ အရမျးခမျြးသာသူတှကေတော့ ဝငျငှေ စုဆောငျးငှေ အမြားကွီးရနသေူတှမေို့ သူတို့ဟာ အနညျးဆုံး ၁၀ နှဈစာအထိ အနာဂါတျကို စဉျးစားထားကွတယျ။
အုပျစု (၃) ထဲမှာပါပွီး လခစားလုပျနတေဲ့ ကနြျောဟာ ဒီအခကျြတှကေို သိလာတဲ့အတှကျ ပထမဆုံး တဈနှဈတာအတှကျ ဝငျငှရေအောငျ စဉျးစားတဲ့ အကငျြ့တဈခု လုပျလိုကျတယျ။ ကနြေျာ့ကိုယျ ကနြျော ပွနျမေးတယျ။ "ငါ့ဝငျငှကေို ဒီတနှဈအတှငျး ၂ ဆ တိုးအောငျ ဘယျလိုလုပျရမလဲ"။ အဲဒီလို တကယျတှေး ကွညျ့လိုကျတော့ ဝငျငှရေနိုငျမယျ့ နညျးလမျးတှကေို ရှာတှလေ့ာတယျ။ လုပျကွညျ့တယျ။ ဝငျငှဟော ၂ ဆ အထိ တိုးမသှားပမေဲ့ အရငျကထကျ အမြားကွီး တိုးလာခဲ့တယျ။ ကနြျော အားတကျလာတယျ။
ဝငျငှရေနိုငျတဲ့ နညျးလမျးတှကေို စဉျးစားရှာဖှအေားတကျလာလို့ လခစားအလုပျက ထှကျပွီး ကိုယျပိုငျ လုပျငနျးတဈခုလုပျလိုကျတယျ။ နောကျပိုငျးမှာ ၁၀ နှဈစာ ဝငျငှတေိုးဖို့ ဘာလုပျရမယျဆိုတာ စဉျးစားလာတယျ။ ရှာတှတေဲ့ နညျးလမျးတှကေို အသီအစဉျခမြှတျပွီး အကောငျအထညျ ဖျေါတယျ။ ဝငျငှတှေေ အမြားကွီး တိုးလာတယျ။ အခု ကနြျောဟာ အခမျြးသာဆုံးလူတဈယောကျလို့ မပွောနိုငျသေးပမေဲ့ အုပျစု (၄) လူခမျြးသာစာရငျး ဝငျနပေါပွီ။ အခု လကျရှိမှာတော့ ကနြျောဟာ နောငျအနှဈ၂၀ ကာလအတှကျ တှေးနပေါပွီ။
အဲဒါဟာ မီလြံနာသနျးကွှယျသူဋ်ဌေးကွီးတှရေဲ့ စဉျးစားပုံ၊ တှေးချေါပုံ တဈခုပါ။
သငျလဲ ကွီးပှားခမျြးသာခငျြရငျ ရရှေညျအတှကျ စဉျးစားတှေးချေါပါ။ စဉျးစားတှေးချေါဖို့ အရငျးအနှီး စိုကျစရာ၊ ငှတေဈပွားမှ ပေးစရာ မလိုသလို ခကျခဲရှုပျထှေးတဲ့ အလုပျလညျး မဟုတျပါဘူး။ နစေ့ဉျ အခြိနျတဈခု ပေးပွီး အာရုံစိုကျ စဉျးစားသှားရငျ အကငျြ့တဈခု ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။ ဦးနှောကျဟာခန်ဓာကိုယျက ကွှကျသားတှလေိုပါပဲ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျရငျ ကွှကျသားတှေ သနျမာလာစသေလို မြားမြား စဉျးစားပေးရငျ ဦးနှောကျဉာဏျ ထကျသနျလာပါလိမျ့မယျ။
စဉျးစားခငျြတယျ၊ မစဉျးစားခငျြဘူးဆိုတာကတော့ သငျ့အပျေါမှာ မူတညျပါတယျ။ လူဖွဈလာတဲ့ ဘဝတာလေးမှာ အပူအပငျကငျးကငျးနဲ့ စိတျရှိသလောကျ လှူနိုငျတနျးနိုငျတဲ့ ဘဝနဲ့ ကုနျဆုံးသှားမလား၊ တဈန့စားဖို့ တဈန့ ပူပငျနရေတဲ့ ဘဝနဲ့ ကုနျဆုံးသှားခငျြသလား ဆိုတာတော့ သငျ့ပျေါမှာပဲ မူတညျနပေါတယျ။ သငျ စဉျးစားဖို့ ဘယျသူကမှ သငျ့ကို တိုကျတှနျးလို့ မရပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အသကျကွီးလို့ နစေရာမရှိ၊ စားရမဲ့ သောကျရမဲ့ ဘဝဖွဈတဲ့အခါကရြငျ ဘယျသူ့ကိုမှ အပွဈမတငျပါနဲ့။ သငျ့ကိုယျသငျပဲ အပွဈတငျပါ။
ပထမ စဉျးစာဖို့ လိုပါတယျ။ ဒုတိယ စဉျးစားမိတာကို အကောငျအထညျဖျေါဖို့ လိုပါတယျ။ စဉျးစားရုံပဲ စဉျးစားနပွေီး အကောငျအထညျမဖျေါရငျတော့ ဘာမှဖွဈလာမှာ မဟုတျပါဘူး။
မှတျခကျြ။ Keith Cameron Smith ရေးတဲ့ "The Top 10 Habits of Millionaires" စာအုပျထဲက ဆောငျးပါးတဈပုဒျကို မှီးထားတာပါ။
Credit - ဗနျးမျောသိနျးဖေ - မွငျ့ဦး
လူတွေကို အုပ်စုအလိုက် ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် . . . . .
တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူတွေကို အုပ်စု (၅) မျိုး ခွဲခြားသတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။
အုပ်စု (၁)။ အရမ်းဆင်းရဲသူများ
အုပ်စု (၂)။ ဆင်းရဲသူများ
အုပ်စု (၃)။ အလယ်အလတ်တန်းစားလူများ
အုပ်စု (၄)။ ချမ်းသာသူများ
အုပ်စု (၅)။ အရမ်းချမ်းသာသူများ (Millionaires, Billionaires)
အဆင့်အလိုက် သူတို့တွေရဲ့ စဉ်းစားတွေးတောမှုကို သုံးသပ်ကြည့်ရင်
အုပ်စု (၁)။ အရမ်းဆင်းရဲသူများဟာ တစ်နေ့တာအတွက်ပဲ စဉ်းစားကြတယ်။
အုပ်စု (၂)။ ဆင်းရဲသူများဟာ တစ်ပါတ်စာအတွက်ပဲ စဉ်းစားကြတယ်။
အုပ်စု (၃)။ အလယ်အလတ်တန်းစားလူတွေဟာ တစ်လစာပဲ စဉ်းစားကြတယ်။
အုပ်စု (၄)။ ချမ်းသာသူများဟာ တစ်နှစ်စာအတွက်ပဲ စဉ်းစားကြတယ်။
အုပ်စု (၅)။ အရမ်းချမ်းသာသူတွေကတော့ အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ်စာ အထိ စဉ်းစားကြတယ်။
# သူတို့ရဲ့ အဓိကရည်မှန်းချက်တွေကို သုံးသပ်ကြည့်ပြန်ရင်
အုပ်စု (၁) နဲ့ (၂) - ဆင်းရဲနဲ့ အရမ်းဆင်းရဲအုပ်စုရဲ့ ရည်မှန်းချက်က အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးတစ်ခုပဲ။
အုပ်စု (၃) - အလယ်လတ်တန်းစားလူတွေရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ချောင်ချောင်လည်လည် နေနိုင်ဖို့ပါ။
အုပ်စု (၄) နဲ့ (၅) - ချမ်းသာနဲ့ အရမ်းချမ်းသာအုပ်စုက ပူပန်ကြောင့်ကျကင်းတဲ့ ဘဝကို ရရှိဖို့ပါ။
# အခုတစ်ခါ အုပ်စုတွေက လူတွေဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲ။
အုပ်စု (၁) အရမ်းဆင်းရဲသူများမှာ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရတဲ့ အလုပ်ကြမ်းသမာတွေ၊ နေ့စား အလုပ်အလုပ်သမားတွေပါဝင်ကြပါတယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စားဖို့သောက်ဖို့ ပူပန်နေကြရတယ်။
အုပ်စု (၂)။ ဆင်းရဲသူများဟာ တစ်ပါတ်စာလုပ်ခရတာလေးနဲ့ တစ်ပါတ်စာ လောက်ငအောင် သုံးကြသူတွေပါ။ တစ်ပါတ်တခါ ပိုက်ဆံ ကုန်ခါနီးကျရင် ပူတတ်သူတွေပါ။
အုပ်စု (၃)။ အလယ်အလတ်တန်းစားလူတွေကတော့ လခစားဝန်ထမ်းတွေပါ။ သူတို့ဟာ လကုန်ခါနီးကျရင် နောက်လဆန်းတာနဲ့ ရေဖိုး၊ မီဖိုး၊ အိမ်ခန်းငှားခ၊ ကလေးကျောင်းလခပေးဖို့တွေ ပူပန်နေကြရပြီ။ တစ်လတစ်ခါ ပူပန်နေကြရသူတွေပါ။
အုပ်စု (၄)။ ချမ်းသာသူများဟာ တစ်နှစ်စာဝင်ငွေကို ရှိနေကြလို့ တစ်နှစ်မှ တစ်ခါလောက် ပူပန်ကြတယ်။
အုပ်စု (၅)။ အရမ်းချမ်းသာသူတွေကတော့ ဝင်ငွေ စုဆောင်းငွေ အများကြီးရနေသူတွေမို့ သူတို့ဟာ အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ်စာအထိ အနာဂါတ်ကို စဉ်းစားထားကြတယ်။
အုပ်စု (၃) ထဲမှာပါပြီး လခစားလုပ်နေတဲ့ ကျနော်ဟာ ဒီအချက်တွေကို သိလာတဲ့အတွက် ပထမဆုံး တစ်နှစ်တာအတွက် ဝင်ငွေရအောင် စဉ်းစားတဲ့ အကျင့်တစ်ခု လုပ်လိုက်တယ်။ ကျနော့်ကိုယ် ကျနော် ပြန်မေးတယ်။ "ငါ့ဝင်ငွေကို ဒီတနှစ်အတွင်း ၂ ဆ တိုးအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ"။ အဲဒီလို တကယ်တွေး ကြည့်လိုက်တော့ ဝင်ငွေရနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ရှာတွေ့လာတယ်။ လုပ်ကြည့်တယ်။ ဝင်ငွေဟာ ၂ ဆ အထိ တိုးမသွားပေမဲ့ အရင်ကထက် အများကြီး တိုးလာခဲ့တယ်။ ကျနော် အားတက်လာတယ်။
ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို စဉ်းစားရှာဖွေအားတက်လာလို့ လခစားအလုပ်က ထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ၁၀ နှစ်စာ ဝင်ငွေတိုးဖို့ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားလာတယ်။ ရှာတွေ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အသီအစဉ်ချမှတ်ပြီး အကောင်အထည် ဖေါ်တယ်။ ဝင်ငွေတွေ အများကြီး တိုးလာတယ်။ အခု ကျနော်ဟာ အချမ်းသာဆုံးလူတစ်ယောက်လို့ မပြောနိုင်သေးပေမဲ့ အုပ်စု (၄) လူချမ်းသာစာရင်း ဝင်နေပါပြီ။ အခု လက်ရှိမှာတော့ ကျနော်ဟာ နောင်အနှစ်၂၀ ကာလအတွက် တွေးနေပါပြီ။
အဲဒါဟာ မီလျံနာသန်းကြွယ်သူဋ္ဌေးကြီးတွေရဲ့ စဉ်းစားပုံ၊ တွေးခေါ်ပုံ တစ်ခုပါ။
သင်လဲ ကြီးပွားချမ်းသာချင်ရင် ရေရှည်အတွက် စဉ်းစားတွေးခေါ်ပါ။ စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့ အရင်းအနှီး စိုက်စရာ၊ ငွေတစ်ပြားမှ ပေးစရာ မလိုသလို ခက်ခဲရှုပ်ထွေးတဲ့ အလုပ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့စဉ် အချိန်တစ်ခု ပေးပြီး အာရုံစိုက် စဉ်းစားသွားရင် အကျင့်တစ်ခု ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဦးနှောက်ဟာခန္ဓာကိုယ်က ကြွက်သားတွေလိုပါပဲ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင် ကြွက်သားတွေ သန်မာလာစေသလို များများ စဉ်းစားပေးရင် ဦးနှောက်ဥာဏ် ထက်သန်လာပါလိမ့်မယ်။
စဉ်းစားချင်တယ်၊ မစဉ်းစားချင်ဘူးဆိုတာကတော့ သင့်အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ လူဖြစ်လာတဲ့ ဘဝတာလေးမှာ အပူအပင်ကင်းကင်းနဲ့ စိတ်ရှိသလောက် လှူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ ဘဝနဲ့ ကုန်ဆုံးသွားမလား၊ တစ်န့စားဖို့ တစ်န့ ပူပင်နေရတဲ့ ဘဝနဲ့ ကုန်ဆုံးသွားချင်သလား ဆိုတာတော့ သင့်ပေါ်မှာပဲ မူတည်နေပါတယ်။ သင် စဉ်းစားဖို့ ဘယ်သူကမှ သင့်ကို တိုက်တွန်းလို့ မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အသက်ကြီးလို့ နေစရာမရှိ၊ စားရမဲ့ သောက်ရမဲ့ ဘဝဖြစ်တဲ့အခါကျရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မတင်ပါနဲ့။ သင့်ကိုယ်သင်ပဲ အပြစ်တင်ပါ။
ပထမ စဉ်းစာဖို့ လိုပါတယ်။ ဒုတိယ စဉ်းစားမိတာကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ လိုပါတယ်။ စဉ်းစားရုံပဲ စဉ်းစားနေပြီး အကောင်အထည်မဖေါ်ရင်တော့ ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မှတ်ချက်။ Keith Cameron Smith ရေးတဲ့ "The Top 10 Habits of Millionaires" စာအုပ်ထဲက ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို မှီးထားတာပါ။
Credit - ဗန်းမော်သိန်းဖေ - မြင့်ဦး
ဆရာမငျးခိုကျစိုးစံရေးတဲ့ "ကြှနျတျောတို့ဘဝမှာ ဘာတှကေို တညျဆောကျနခေဲ့ကွပါလိမျ့?"
ဆရာဦးနအေုပျ သငျကွားပို့ခထြားတဲ့ Pattern အနှဈခြုပျ
စာဖတျသူ နှငျ့ စာမဖတျသူ
အင်ျဂလိပျ-မွနျမာ မှေးသက်ကရာဇျလေးတှကေို တှဲမှတျကွရအောငျ